Media and Bias !!! | ကိုသင္ကာ . . . . Ko Thinker
← Grin and Anvil
ထိုင္းေတြ ျမန္မာအေပၚ အထင္မေသးၾကေတာ့ဖို႔ စေျပာၿပီ →
March 31, 2012 · 8:37 pm
Media and Bias !!!
(Pic – Karlonia)
ကိုမော်ကင်းက မေးတယ်။ “မီဒီယာဟာ ဘက်လိုက်မှုကင်းရမယ် ဆိုတာနဲ့ မီဒီယာဟာ ဘက်တဖက်ဖက် လိုက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုပြီး အငြင်းပွားနေပါတယ်။ ဘက်လိုက်မှုကင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဖက်က မီဒီယာဆိုတာ သတင်းနဲ့ လူသားကြား ကြားခံဒြပ်မို့ ဓာတ်ပြုမှုကင်းတဲ့ ဒြပ်စင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါမှ သတင်းစစ်ကို လူတွေဆီ ပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီး တဖက်ကတော့ မီဒီယာဟာ အားနည်းတဲ့သူဖက် အဖိနှိပ်ခံဖက် ပြည်သူ့ဘက် ရပ်တည်ရမယ်။ ဒါမှ လူ့ဘောင်လောကမှာ တရားမျှတမှုတွေ ပေါ်ထွန်းမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘယ်အဆိုက မှန်တယ်လို့ ယူဆပါသလဲ” တဲ့။
ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်အတ္တနောမတိ (ကိုယ်တွေးထင်ယူဆချက်) အတိုင်း ပြောပါမယ်။ မီဒီယာတခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုတယ် မထင်စေချင်လို့ပါ။
ဒါကတော့ စာနယ်ဇင်းသမား လုပ်တော့မယ်၊ စာနယ်ဇင်းအခြေခံ သင်တန်းတက်တော့မယ်ဆို ကျင့်ဝတ် (Ethic) ပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးလေ့လာရတဲ့ ခေါင်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ အနေနဲ့ “ကာလ၊ ဒေသ၊ ပယောဂ” ကို တည်ပြီးပဲ ကျနော်က ပြောချင်ပါတယ်။
ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကြီးတွေ အားကောင်းစဉ်က ဒိုမီနိုသီအိုရီအရ ဘေးနိုင်ငံငယ်တွေ နီကုန်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဘက်ကို အနောက်စာနယ်ဇင်းတွေက လိုက်ပြီးရေးခဲ့ကြပါတယ်။ ခုခေတ်မှာလည်း တရုတ်စာနယ်ဇင်းတွေက အမေရိကန်ကို ခပ်နာနာလေး ပုတ်ခတ်ရေးကြပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံ မီဒီယာတွေကလည်း မြန်မာ၊ အီရန်၊ တရုတ်၊ ရုရှားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားကို သတင်း၊ ဆောင်းပါးတွေရေးရင် အနုတ်လက္ခဏာဘက်ကပဲ ရေးတာများပါတယ် (ကျနော်တို့ အများစုကရော ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကောင်းတာနဲ့ ဆိုးတာ ဘယ်ဟာက ပိုများနေတယ်လို့ ခံစားမိနေသလဲ)။ ဒီလို အသီးသီး အသက အသက ဘက်လိုက် (Bias) ဖြစ်ကြတယ်လို့ ယူဆနိုင်တာတွေ ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အစိုးရကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ စာနယ်ဇင်း၊ ပါတီအဖွဲ့အစည်း တခုခုရဲ့ အာဘော် စာနယ်ဇင်း၊ ရည်ရွယ်ချက် တခုခုအတွက် ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေက သူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့အတွက် ဒီဆွေးနွေးမှုကနေ ဖယ်ထုတ်လိုက်ကြစို့။ ပေမီဒေါက်မီ စာနယ်ဇင်း မီဒီယာများကိုသာ အာရုံပြု ပြောကြစို့။
“တို့ဂျာနယ်လစ်တွေ ဘယ်အချိန်မှာ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ကျင့်ဝတ်ကို ဂရုမစိုက်တော့ဘဲ ဘက်လိုက်ကြမလဲ” ဆိုတာကို စာနယ်ဇင်းသင်တန်းတွေမှာ ခဏခဏ ကြားရပါတယ်။ သေချာတာတခုကတော့ “နိုင်ငံတခုလုံးကိစ္စ၊ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား၊ လူသားထု အများစုရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို မထိခိုက်အောင်၊ နစ်နာမှု မရှိအောင် ကာကွယ်ဖို့ ရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ဘက်လိုက်ကြရမယ်” လို့ သဘောတူညီကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ အကျိုးစီးပွား ပြဿနာ အဓိက သာမညအပေါ် ဆုံးဖြတ်ကြရမယ့်ကိစ္စလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ချိန်ထိုးကြမယ်ဆိုရင် အခု ပြည်တွင်း ပြည်ပ မြန်မာမီဒီယာတွေဟာ တိုင်ပင်မထားဘဲ ဘာလို့ အနည်းနဲ့ အများ နိုင်ငံရေးကိစ္စမှာ ဘက်လိုက်နေကြသလဲ ဆိုတာအပေါ် ဆင်ခြေပေးနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒေါင်းပါတီက ရွာတရွာကို ရိုးရိုးပဲ မဲဆွယ်တယ်၊ ခြင်္သေ့ပါတီကတော့ အဲဒီရွာကို တခုခုလုပ်ပေးပြီး မဲဆွယ်တယ်။ ဒေါင်းပါတီ ဘာပြောပြော၊ ကားပေါ်က ပြုတ်ကျလို့ ဒူးပြဲတာကအစ မီဒီယာတွေက ရေးတယ်။ ခြင်္သေ့ပါတီ လုပ်ပေးတာ မရေးပေးဘူး၊ ရေးရင်လည်း ဒီလို ပေးကမ်းတာ ဥပဒေနဲ့ ငြိနေပါတယ်ဆိုပြီး ရေးမယ်။ အမှန်တွေ ရေးတာပဲလို့ ပြောနိုင်သလို ဒါ ဘက်လိုက်တယ်လို့လည်း ပြောနိုင်တာပါပဲ။
ကျနော့်တကိုယ်တည်း အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်ကို မွဲပြာကျ၊ ပညာရေးစနစ်ကအစ ပျက်ယွင်း၊ မျိုးဆက်နဲ့ချီ စုတ်ပြတ်ထွက်ပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ခဲ့ကာ အခုကျမှ အသံကောင်းဟစ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဆက်ခံသူများအပေါ် မျှတစိတ်ထားပေးဖို့၊ သမစိတ္တနဲ့ ရှုမြင်ပေးဖို့ အတော်ပဲ ခဲယဉ်းလှတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ် (စာနယ်ဇင်းဘက်လိုက်မှုကို ကာလ၊ ဒေသ၊ ပယောဂနဲ့ ရှုမြင်မယ်လို့ ကျနော် စကားခံပြီး ဖြစ်ပါတယ်)။ ဒါတောင် ကိုယ်တွေခံစားရတယ်ဆိုတာ တကယ့်စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသူများနဲ့ယှဉ်ရင် ပြောပလောက်ဖွယ် တခုမှ ရှိသေးတာ မဟုတ်ဘူး။
ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေက သင်ပုန်းချေတယ်၊ အာဃာတ မထားဘူးဆိုပြီး ခွင့်လွှတ်ကြတယ်လို့ သဘောထားကြီးပေးကြပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်တာ မေ့ပစ်တာမဟုတ်ဘူး (Forgiveness is not to forget) ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ သတိရစေချင်ပါတယ်။
ကျနော့် သင်ဆရာ မြင်ဆရာဖြစ်တဲ့ အယ်ဒီတာတဦးကတော့ “မီဒီယာမှန်ရင် တနည်းနည်းနဲ့တော့ ဘက်လိုက်ကြတာပါပဲကွာ” လို့ ပြတ်ပြတ်ပဲ မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။
မြန်မာမီဒီယာများကို လက်လှမ်းမီသလောက် ကြည့်ကြစို့။ အစိုးရသတင်းစာတွေကတော့ သတင်းစာ အမည်ခံထားတဲ့ အစိုးရထုတ်ပြန်ချက် (ဂေဇက်) မျှသာ ဖြစ်လို့ ထည့်ပြောဖို့ မလိုပါဘူး။
ပုဂ္ဂလိက စာနယ်ဇင်းတွေကရော ?။ ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရ အသီးသီး ဘက်လိုက်မှု ရှိတာပါပဲ။
အဂတိတရား လေးပါးကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ တခြား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အငြိုးအတေး၊ အထိအခတ်များကြောင့်သော်လည်းကောင်း တနည်းနည်းနဲ့တော့ ဘောင်အတွင်းက ဘက်လိုက်ကြပါတယ်။ ပေါ်တင်ကြီး ဘက်လိုက်တာတောင် တွေ့မြင်နိုင်ကြပါသေးတယ်။
ဂျာနယ်တွေကို သေချာဖတ်ကြည့်ရင် သတင်းကို သတင်းအဖြစ် ရေးတာမျိုး တွေ့နိုင်သလို တချို့ကိစ္စတွေမှာ ဘယ်ဘက်က ရပ်တည်ပြီး ရေးနေသလဲဆိုတာ သတိထားဖတ်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းတွေမှာ ခံစားချက် (emotion) မပါအောင်၊ မထင်ဟပ်အောင် အထူးသတိထားရေးကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဖက်ဖက်ကို လိုက်တယ်၊ မလိုက်ဘူးက သေချာဖတ်ရင် သတိပြုမိနိုင်ပါတယ်။
သတင်းတပုဒ်ကို တင်ပြထားတယ်ဆိုရင် တင်ပြပုံတင်ပြနည်းမှာ ဘယ်လို ဘက်လိုက်သလဲဆိုတာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လတ်တလော တခုကို နမူနာပေးကြည့်ရအောင်။ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို လူသူလေးစားလောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုပြီး သူတို့ အရင် ပလဲပနံသင့်ကြတဲ့ အာဏာပိုင်ဟောင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့တယ်။ ဦးသိန်းစိန်က ကမကထပြုပေးတယ်။ လွှတ်တော်မှာ သူတို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ ဘတ်ဂျက် ကျပ်သန်းများစွာ လာတောင်းတယ်။ လွှတ်တော်က ပယ်ချလိုက်တယ်။ အင်းစိန်ထောင် သွားကြည့်ပြီး အပြင်က ပြောနေကြသလောက် မဆိုးပါဘူးလို့ ပြောတဲ့ ဒီကော်မရှင်အပေါ် မီဒီယာတွေက ဘယ်လိုရေးမလဲ။
“အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်”
“မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်”
“မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနှစ် ၂၀ အတွင်း ပထမဆုံး ပေါ်ပေါက်လာသည့် အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်”
“တိုင်ကြားစာ၊ အသနားခံစာများကို ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ပေးနေသော အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်”
“အစိုးရ ကျောထောက် နောက်ခံပေးထားသော အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်”
“အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိဟောင်းများဖြင့် ခန့်အပ်ဖွဲ့စည်းထားသော အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်”
“လွှတ်တော်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် မညီဟုဆိုကာ ရသုံးငွေစာရင်း ပယ်ဖျက်ခံရသော အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်”
“ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၁ နှစ်တာကာလအတွင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း မရှိသော အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်”
မီဒီယာတွေက သူတို့ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ပေါ် မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး သုံးနိုင်သလို အကယ်၍ စာဖတ်သူဟာ လူတန်းစားအလွှာ အသီးသီးက မတူခြားနားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ နောက်ခံတွေ ရှိရင် အပေါ်က “အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်” ကို ခေါ်ဝေါ် နာမဝိသေသန ပြုထားတဲ့အပေါ်လည်း အကြိုက် ကွဲလွဲပါလိမ့်မယ်။
စစ်ဗိုလ်တယောက်က အပေါ်ခေါင်းစဉ်ထဲက တမျိုးကို ကြိုက်ပေမယ့်၊ ထောင်ထဲမှာ အသေဆိုးနဲ့သေသွားရသူတဦးရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကတော့ တခြားခေါင်းစဉ်ကို ကြိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဖြင့်ရင် ကျနော်က ပြန်မေးမယ်၊ စာဖတ်သူတွေကရော ဘယ်လောက် အစွဲကင်းပါသလဲ။
စာနယ်ဇင်း မီဒီယာများဟာ တင်ပြပုံသေသေသပ်သပ်နဲ့ သူတို့ဦးဆောင်ချင်တာကို ဘက်လိုက်မှန်း မသိစေရဘဲ စာဖတ်သူကို ဆွဲဆောင်သွားတတ်တာ မှန်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ စာဖတ်သူကလည်း ဘဝင်ကျချင် ကျနေတတ်ပါတယ်။ အခါများစွာ မီဒီယာနဲ့ ပရိသတ်အများစုဟာ ခံတွင်းနဲ့ ခံတွင်းထဲက တံတွေးလို ဖြစ်ရင်လည်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်၊ ပါးစပ်ထဲရှိနေသမျှတော့ အဆင်ပြေတယ် (ဘဝင်ကျနေသရွေ့ပေါ့)၊ ထွေးပြီးရင်တော့ ပြန်သွင်းလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။
“သမာသမတ်ကျကျ ရှုမြင် တင်ပြသင့်သည်” ဆိုတာ အင်မတန်မှ လျော်ကန်တဲ့ ထောက်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီဒီယာ စာနယ်ဇင်းတွေကတော့ တနည်းနည်းနဲ့ ဘက်လိုက်မှု အနည်းအများရှိတာတော့ အသေအချာပါပဲ။
အဲဒီတော့ တခုပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားနဲ့ စပတ်သက်လာပြီး ငဲ့ကွက်စရာတခုခုနဲ့ ငြိနေပြီဆိုရင် ဘက်လိုက်မှု အနည်းငယ် ပါတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားနဲ့ ဝေးလေ ဘက်လိုက်မှုဆိုတာမရှိလေ၊ အရောင်ကင်းလေပါပဲ။
“သတင်းသမားက အချက်အလက်ကိုသာ ပေးတယ်၊ စာဖတ်သူက ဆုံးဖြတ်ပါစေ” လို့ သီဝရီအရ ပြောဆိုကြငြားသော်လည်း စာနယ်ဇင်း မီဒီယာ အားလုံးလိုလိုက စာဖတ်သူရဲ့ အတွေးအမြင် အယူအဆအပေါ် ပုံသွင်းမှု (Shape) သော်လည်းကောင်း၊ လှုပ်နှိုးဆွမှု (Shake) သော်လည်း လုပ်ကြတဲ့၊ လုပ်ရတဲ့၊ လုပ်ချင်ကြတဲ့ သဘော ရှိပါတယ်။
လူတိုင်းဟာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာနနဲ့ မကင်းကြပါဘူး။ ထို့အတူ အမှန်နဲ့ အမှား၊ တရားမျှတမှုနဲ့ ဘက်လိုက်မှုဆိုတဲ့ သမုတိသစ္စာတွေကို ခြားထားတဲ့ စည်းဟာ ပါးလွန်းတဲ့အတွက် ဒီလို ကျင့်ဝတ်ကိစ္စတွေဟာ မီဒီယာ စာနယ်ဇင်းလောကမှာသာမက ကျန် ပညာရေး၊ ဆေးပညာ၊ လူ့အခွင့်ရေး၊ ဘာသာရေး လောက ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ယနေ့အထိ ငြင်းခုန်မစဲ တသဲသဲဆိုတာ ပြန်ထောက်ချင့်ကြည့်ရင် အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းနိုင်ကြမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ စာနယ်ဇင်း မီဒီယာဆိုတာလည်း ဒီဝဲသြဃယန္တရားကြီးထဲမှာ လိုက်ပါလည်ပတ်နေတဲ့ ခွေးသွားစိတ်တခုမျှသာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
(၂၈၊ မတ်၊ ၂၀၁၂)
Read in my Facebook note with comment also: ဘယ္သူေတြမွားလဲ ခြဲျခားသိပါရေစ
One response to “Media and Bias !!!”
မီဒီယာဘက္လိုက္မႈနဲ့ပတ္သက္လို့ အေတြးသစ္အျမင္သစ္မ်ားကို လႈံ့ဆြေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မီဒီယာ ဟာ ဘက္လိုက္ရမယ္၊ ဆြဲေဆာင္ရမယ္ ဆိုတာထက္ သစၥာရွိရမယ္၊ ျပည္သူဘက္ကရပ္တည္ရမယ္ ဆိုတာကိုေဇာင္းေပးလိုပါတယ္